Berbera Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Wafti Hogaaminayey Guddoomiyaha Urur-Siyaasadeedka WADANI | FooreNews
Home wararka Berbera Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Wafti Hogaaminayey Guddoomiyaha Urur-Siyaasadeedka WADANI
Berbera Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Wafti Hogaaminayey Guddoomiyaha Urur-Siyaasadeedka WADANI
Berbera (Foore)- Dadweynaha ku nool magaalo-madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, ayaa shalay si layaab leh u soo dhaweeyey wefti ballaadhan oo uu hogaaminayay guddoomiyaha urursiyaasadeedka WADANI, isla markaana waxa magaalada laga furay laba xafiis oo ururku ka hawlgeli doono.
Soo dhawaynta ay ku qaabileen reer Berbera weftiga WADANI, ayaa guud ahaan laga dareemay magaalada iyadoo dadweyne aad u fara badan oo gaadiid wataa ay guddoomiyaha iyo weftigiisa kaga hortegeen kaantaroolka magaalada.
Guddoomiyaha urur-siyaasadeedka WADANI Md. Cadbiraxmaan Maxamed Cabdilaahi [Cirro] oo markii ay gudaha magaalada soo galeen xadhiga ka jiray xarunta ururka ee Berbera iyo xafiiska kale, ayaa halkaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa uga jeediyey dadkii faraha badnaa ee soo dhaweeyey isaga oo si weyn ugu macahadceliyey dadweynaha reer Berbera ee si labaabka leh u qaabilay.
“Ururka WADANi waa hanti ay wada leeyihiin dadka reer Somaliland, waana urur isu sharciyeeyey dawlad wanaag, toosin iyo wax-qabad inuu ku soo kordhiyo Somaliland. Ururka WADANi inay Somaliland wada leedahay waxa markhaati ka ah markii la diwaangelinayey degmo iyo gobol cid ka maqnayd midna muu jirin.” Ayuu yidhi guddoomiye Cirro.
Waxaana uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Markii lacagta diwaangelinta la bixinayey dhammaan dadka reer Somaliland way ka wada qayb-qaateen. Waana markhaati ka ah waa ururkii ugu horreeyey ee si sharci ah isu diwaangeliyo. Lacagtaa la wada bixyey qayb kasta oo bulshada ka mid ahi waxbay ku lahayd.”
Waxa uu guddoomiyuhu ka hadlay waxa uu mustaqbalka qaban doono ururka WADANI, isaga oo xusay inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha asaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo wax-soo-saarka, isla markaana waxa uu si gaar ah u tilmaamay in WADANI xoogga saari doono sidii Somaliland ku heli lahayd ictiraaf caalami ah.
Waxa uu sheegay Guddoomiyuhu in xilligan Somaliland u baahan tahay siyaasiyiin muddakar ah oo ka dhabayn kara hilimilada Somaliland, isaga oo ugu baaqay dadka ku loolamaya saaxadda siyaasadda inay ilaaliyaan dishbiliinka iyo sharcigga tartanka xorka ah.
Guddoomiye Cirro waxa kale oo uu dadweynaha reer Berbera ka codsaday inay codkooda ku taageeraan WADANI si ay ugu guulaystaan tartanka lagu soo baxayo ee xisbinimo.
Waxa isaguna halkaa ka hadlay Dr. Idiris Xaaji Nuur oo dadweynaha reer Berbera u soo jeediyey inay si buuxda u taageeraan urur-siyaasadeedka WADANI, isaga oo tibaaxay in ururkani haddii uu soo baxo inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha kala duwan ee la raagiyey dadweynaha ku nool deegaanka Berbera.
Dhinaca kale Wafti uu hogaaminaayo Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee Urur Siyaasadeedka WADANI ayaa khudbado kala duwan u jeediyay dad weynaha ku dhaqan Magalada Dacar budhuq ee Degmada Laas-geel iyo Magaalada Abdaal ee Degmada Mandheera.
Dadweyne aad u badnaa oo ruxayay calanka iyo calamada Ururka Wadani oo safaf u taagnaa wadooyinka magaalooyinkaas ayaa ugu horayn wafti waxay khudbad kooban dad weynaha meel fagaare ah uga jeediyeen Guddoomiye Ururka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi “Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay sida diiran ee aad u soo dhawayseen Waftiga Urur Siyaasadeedka Wadani, waxanan idin sheegayaa inaan Degmada Laas-geel igu cusbeen ee ay tahay Magaladaydii, Ururkan aanu wadaana waa mid dadku wada leyahay.” Sidaas waxa yidhi Guddomiye Cirro, sido kale waxa halkaas ka hadlay mid ka mid ah Odayaasha Deegaanka Laas-geel “Hadaanu nahay Odayaasha, dhalinyarada, haweenka iyo wax-garadka Degmada Laas-geel waxaanu si diiran u soo dhawaynaynaa Ururkan Wadani ee halkan lagu soo bookhday, halkaasna ka sii wada, anaguna waanu idin garab taaganay.”
Sidoo kale Magadalada Abdaal ee Degmada Mandheera ayuu waftigu khudbado kooban u jeediyay “Dadweynaha reer Abdaal waxaan u sheegayaa inaan idiinku maqnaa sahan, sahankiina waxaan idiinku soo helay Ururka Wadani, markaas waxaanu idinka rajaynaynaa sidaas aad noo soo dhawayseen inaad noola shaqayn doontaa insha ALLAH.” Sidaas waxaa yidhi Gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cabdiraxmaan Cirro.) waxaa kaloo halkaas khudbad kooban ka jeediyay Dr Idiris Xaaji Nuur “Horta aniga waad igaranaysaan waxaan ahay dhakhtarkii Dawada idiin keeni jiray ee caruurta idiin daweynjiray maantana waxaan idin wadaa Ururkan Wadani oo aan hubo inuu xaga caafimaadka idinka taageeri doono iyo dhinac walba.”
Previous PostXidhiidhiyaha Mashruuca Xoolaha Ee Hay’adda FAO Ee Somaliland Oo Caadaystay In Uu Muwaadiniinta Iska Hortaago Fursadaha Shaqo Next PostKu Xigeenka Maayarka Hargeysa Oo Maayar Jiciir Ku Eedeeyey Xashiishka Buux Dhaafiyay Magaalada Iyo Wax Qabad La’aanta Golaha Deegaanka Kuna Tilmaamay Nin Qabyaaladdu Madax Martay